आज, यो बेरी सबैभन्दा, स्वादिष्ट सुगन्धित र उपयोगी मानिन्छ। रूस मा, व्यापक ठूलो fruited स्ट्रबेरी। प्रजनकों विकास प्रजातिहरू, गणना विशाल संख्या - त्यहाँ बारेमा 3000. तथापि, यो अक्सर स्ट्रबेरी धेरै माली रूपमा उल्लेख गरिएको छ छन्।
किसिमहरु को विकल्प
सुगन्धित जामुन को सफल खेती गर्न प्रमुख - आफ्नो जलवायु क्षेत्र को लागि सही विकल्प प्रजातिहरू। उदाहरणका लागि, हाम्रो देश को उत्तर मा यो दक्षिणी क्षेत्रको लागि जारी बोट प्रजातिहरू गर्न अर्थमा बनाउन गर्दैन। यो राम्रो मा स्थापित छन् सफल र रोपण प्रजातिहरू हुनेछैन रूस केन्द्रिय भाग। तपाईं बस तिनीहरूलाई प्रत्येक आफ्नो सामान्य प्राकृतिक अवस्था मा दिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्राप्त छैन। बिरुवा, किरा, रोग आक्रमण गरिनेछ गर्मी र प्रकाश मा दक्षिणी प्रजातिहरू धेरै उच्च माग देखि। उत्तरी प्रजाति, अवस्था लागि कम विकिरण सिर्जना पनि तापमान र सौर ऊर्जा तिनीहरूलाई लागि उच्च ग्रस्त हुनेछ। nerayonirovannyh प्रजातिहरू प्रयोग निराशा तर केही ल्याउनेछ।
यो उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रहरु, स्ट्रबेरी 'तिहार को लागि एक ठूलो विविधता संग भयो। " यो बेरी हाम्रो देशमा धेरै माली सुने, तर सबै कुनै लाभ को अन्य भागहरु मा बढ्न प्रयासहरू।
माली साइबेरिया वा nerayonirovannyh प्रजातिहरू प्रयोग गर्दा अर्को निराशा लागि प्रतीक्षा को यूराल। स्ट्रबेरी ठूलो fruited "gigantella", "प्रभु", अक्सर बढ्दै प्रस्ताव गर्दै छन्, राम्रो कृषि पृष्ठभूमि माग। उदाहरणका लागि, एक झाडी प्रजातिहरू अन्तर्गत "प्रभु," हरेक वर्ष तपाईं राम्रो-rotted खाद हालन को एक बाल्टिन बनाउन आवश्यक छ। साथै, यो एक ठूलो क्षेत्र, अर्थात् प्रदान गर्न आवश्यक छ E. एक रोपण प्वाल नाप्ने 60x60 सेन्टिमिटर यो विविधता रोपेर गर्न पनि यी अवस्था उत्तर यस्तो प्रजातिहरू मा सबै प्रति स्पाइक मात्र एउटा ठूलो जामुन, र क्रप बाँकी उत्पादन -।। धेरै गरिब गुणस्तर ।
हालै, उत्तरी मा व्यापक ठीक स्ट्रबेरी को प्रजातिहरू ठूलो fruited "कार्मेन" र "Bounty"। तिनीहरूले ठूलो विशेषता द्वारा छन्, दृढ शरीरमा संग जामुन को आकार मा पङ्क्तिबद्ध।
यस लेखमा हामी आफ्नो साइटमा तिनीहरूलाई हुर्किसकेका छन् जो समीक्षा माली थाह प्राप्त गर्न, हाम्रो देश को विभिन्न क्षेत्रहरु को विभिन्न तपाईं परिचय हुनेछ।
स्ट्रबेरी ठूलो fruited: उपनगरहरुमा लागि ग्रेड
सुगन्धित जामुन यी प्रकार अब एकदम धेरै छन्। त्यहाँ पुराना, चिरपरिचित प्रजाति छन्, तर त्यहाँ नियमित रूसी र विदेशी प्रजनकों को नयाँ विकासक्रम हो।
यी नवाचारै को एक "अल्बियन" को एक प्रकारको छ। यो लेट मई देखि सबै भन्दा frosts गर्न fruiting, को remontant प्रजातिहरू पर्छ। फल एकदम ठूलो छ, एक चोटीदार आकार, बाहिर र भित्र, शानदार मा गाढा रातो छ।
को जामुन एक नाजुक सुगन्ध र तीव्र मीठो स्वाद छ। यो विविधता द्वारा पार प्रजातिहरू Diamante र Ca194.16-1, विश्वविद्यालय क्यालिफोर्निया मा नस्ल छ। यो विविधता को एक रोचक सुविधा जवान पात, तिनीहरूले तेल गंदा भने चमकदार छन्। "अल्बियन" तापमान परिवर्तन, रोग आउनुहुनेछ, लेट blight, क्षय हुनु, anthracnose गर्न एकदम प्रतिरोधी छ।
यो किसिम को वजन जामुन पुग्छ '70 ग्रेड "काला हंस" - देर, विशिष्ट मीठो स्वाद र उच्चारण स्वाद। बेरी केहि छाडा, विशेष गरी सुक्खा र तातो गर्मी मा, बिस्तारै पकाना किनभने यसको आकार को - यो को शीर्ष पहिले नै रातो हुन्छ, र तल - पनि सेतो। तर जामुन यस्तो तरिकाले हटाइनु पर्छ - त्यो मीठो र स्वादिष्ट थियो। अन्यथा, यो Rot वा चरा sklyuyut गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
जामुन अर्को लेट किसिम। स्ट्रबेरी "Vima Xima" ठूलो fruited प्रजातिहरू जुलाई को बीचमा वा अन्त मा पकाना garden। फल ठूलो (45 ग्राम) उत्कृष्ट स्वाद संग राम्रो नियमित आकार भएको हो। तिनीहरूले आफ्नो आकार राख्ने हो, त्यसैले रिसाइकिलिंग लागि उपयुक्त छन्। विविधता whiskers एउटा सानो रकम छ।
यो तनाव डच चयन काम को परिणाम, srednepozdnih सम्बन्धित छ। ब्रश शक्तिशाली, आफ्नो व्यास 70 सेमी र उचाइ 50 सेमी छ। छोड्छ उज्ज्वल, ठूलो, मैट, धेरै नालीदार सतह संग। संयंत्र एक धेरै मजबूत फूल बालाको छ। विशेष ठूलो जामुन बाली पहिलो। 100 भन्दा बढी एक धेरै सुखद स्वाद द्वारा प्रतिष्ठित थिए, मिठाई र बाक्लो शरीर रंग मा गाढा रातो छ, नियमित आकार छ - आफ्नो आकार9सेमी र तौल छ। विविधता botrytis र प्रतिरोधी छ स्ट्रबेरी पैसाबारे।
यो नयाँ र सबै भन्दा होनहार विविधता छ। ठूलो-fruited स्ट्रबेरी "रानी" औसत पकने बिरुवाहरु बुझाउँछ। यसलाई सिर्जना गरियो, एसडी Aitzhanova - ब्रीडर ब्रियान्स्क VSTISP अंक अग्रणी। विविधता एक चिरपरिचित प्रजाति "वेंट" र "redgontlet" पार उत्पादित।
बुश औसत उचाइ छ, अर्ध-प्रसार एक थोडा crumpled पाना फारम प्लेट संग लेपित नीलो-हरियो पात।
तीव्र रातो देखि गाढा रातो - स्ट्रबेरी ठूलो फल प्रजातिहरू "रानी" धेरै ठूलो जामुन (50 ग्राम) एक विस्तृत आधार रंग संग पहिलो नियमित चोटीदार आकार सङ्कलन भएको छ। शरीर दृढ छ। स्वाद - मीठा र खट्टा।
स्ट्रबेरी "एलिजाबेथ 2" ठूलो fruited प्रजातिहरू - यो shrub remontant। जामुन ठूलो आकार, तिनीहरूलाई थुप्रै तिनीहरू लाल उज्ज्वल रंग मा चित्रित छन् 110 ग्राम तौल पुग्न, यो सम्भव भएको जामुन लामो दूरी भन्दा, प्रशोधन गर्न, उच्च गुणस्तरीय उत्पादन प्राप्त गर्न, यो अलग पर्दैन र स्ट्रबेरी आकार जोगाउनुहुन्छ ओसारपसार बनाउँछ जो दृढ शरीरमा, छ।
विविधता जाडो-हार्डी, उहाँले तन्तु overwinter गठन रूपमा, एक प्रारम्भिक fruiting छ।
यो विविधता प्रारम्भिक परिपक्वता, डच प्रजनकों को परिणाम को प्रजाति पर्छ। उहाँले पार प्रजातिहरू Chandier र Goreela द्वारा deduced। जामुन ठूलो हो, नियमित चोटीदार आकार र लगभग एउटै आकार छ। तिनीहरूले धेरै मीठा छन् प्राकृतिक शर्करा को एक महान रकम आफ्नो संरचना समावेश। कक्षा एक फाइदा - powdery फफूंदी र hardiness प्रतिरोध।
यसलाई मध्य-ग्रेड, एक ठूलो चमकदार जामुन, एक उच्चारण स्वाद संग रसदार भइरहेको छ। ठूलो-fruited स्ट्रबेरी "सोनाटा" चोटीदार आकार को सुन्दर फल द्वारा विशेषता छ। विविधता जाडो हार्डी छ। यो खुला मैदान मा खेती को लागि उपयुक्त छ, र जाडो Greenhouses मा प्रजनन लागि। बिरुवाहरु खुला घाम क्षेत्रमा रोपिन्छ।
स्ट्रबेरी "सोनाटा" को ठूलो fruited प्रजातिहरू फरक soils मा बढ्दै छ, तर यसको उपज माटो को प्रजनन मा निर्भर गर्दछ। यसलाई हल्का र मध्यम बनोटको soils रुचि।
रोपण पहिला माटो तयार,5किलो जैविक मल को 1 m² र 40 ग्राम / m² खनिज मल बनाउन। त्यसपछि क्षेत्र गहिरो perekapat गर्नुपर्छ। माटो पूर्ण बसे गरेपछि ब्रश लैंडिंग उत्पादन।
आज, यो, सायद, बजार मा पुराना विविधता छ। तसर्थ, ठूलो-fruited स्ट्रबेरी "Clery" थप र अधिक लोकप्रिय हरेक वर्ष बन्नेछ। प्रशंसक बीचमा र बिक्री को लागि यो बेरी हुर्किसकेका गर्ने व्यवसायीक बीचमा दुवै।
ठूलो-fruited स्ट्रबेरी "Clery" लामो पहिले इटालियन वैज्ञानिकहरू-प्रजनकों नस्ल। पहिले नस्ल उच्च-yielding प्रजातिहरू प्राप्त गर्न।
बुश एकदम संकुचित, साना आकार छ। पातहरु तीव्र रंग, मध्यम आकारको छन्। माटो जो बोट यस प्रकार, carbonates धेरै समावेश छ भने, पात स्पष्ट हुन सक्छ। माली यो किसिम को हल्का हरियो पात खेती अभ्यासहरू र दुरुपयोग यसको उपज प्रभावित भएन कुरा छैन सजग हुनुपर्छ।
जामुन "Cleary" ठूलो हो, नियमित चोटीदार आकार छ। तिनीहरूले तीव्र रंग, एक राम्रो चम्कने छ। आफ्नो बाक्लो मज्जा उत्कृष्ट पोर्टेबिलिटी प्रदान गर्दछ।
ठूलो-fruited स्ट्रबेरी (विविधता): समीक्षा
ग्रेड "अल्बियन" व्यापक, आफ्नो उच्च उत्पादकत्व कारण प्रयोग गरिन्छ साथै यो बेरी विकास गरेका छन् जसले ती रूपमा, आफ्नो ठूलो स्वाद उल्लेख गरे।
Cultivar "काला हंस" लेट प्रजातिहरू को सबै भन्दा राम्रो उत्पादक मानिन्छ। भ्रूण को सानो निराशाजनक looseness र यस सन्दर्भमा मा नसक्नुको, लामो दूरीमा त्यसको यातायात।
उत्पादक देखि प्रतिक्रिया, बेरी प्रजातिहरू "Vima Xima" आकर्षक विकल्प प्रक्रिया र उत्कृष्ट स्वाद।
रूपमा समीक्षा देखि देख्न सकिन्छ, यो उपनगरीय माली को सबैभन्दा लोकप्रिय किसिमहरु मध्ये एक छ। यो पनि वर्षाको गर्मी मा चीनी सामग्रीको प्रतिशत रहन्छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा विशेषता छ।
ग्रेड "रानी" माली आंशिक remontant लागि सराहना। उहाँले फसल दिन सक्षम छ।
Muscovites मुख्य रूप कारण यसको प्रारम्भिक पकने गर्न सन्तुष्ट किसिम "एलिजाबेथ 2"। तिनीहरूले फल को वजन, 110 ग्राम सम्म बढ्न अधिकतम सक्छ भनेर याद हुनत उनि रुचि र जामुन को स्वाद, - 70 ग्राम
ठूलो स्वाद, चीनी को ठूलो मात्रा, ठूलो आकार, पर्यावरण स्थिरता - स्ट्रबेरी "Kimberly" (यो माली समीक्षा पुष्टि) को ठूलो fruited प्रजातिहरू यो एक ठोस सद्गुण छ, लगभग सिद्ध छ।
स्ट्रबेरी धेरै माली र बिरुवाहरु पात र जराको को रोगहरु गर्न प्रतिरक्षा सराहना जो "Clery" चिसो गर्न प्रतिरोधी। साथै, विभिन्न विशेष हेरविचार माग छैन।
साइबेरिया ठूलो-fruited स्ट्रबेरी
हाम्रो देश, साइबेरिया को सबै क्षेत्रहरु मा र यो अर्थमा यो सुगन्धित बेरी प्रेम कुनै अपवाद छ। तर ठूलो fruited स्ट्रबेरी कस्तो बढ्न र यो कठोर जलवायु फल फलाउन सक्षम? तिनीहरूलाई केही पूरा।
यो किसिम Sverdlovsk प्रजनकों, विभिन्न प्रारम्भिक पकने को परिणाम हो। मध्यम उचाइ को ब्रश, राम्रो विकास गरे। पातहरु yellowish हरियो, साना आकार हो। आकृति डुङ्गा - पाना को अनुपात। फूल बालाको पातहरु को स्तर मा छन्। क्रप पैदावार - पृथ्वी को एक बुनाई संग 116 किलो। जामुन मध्यम र ठूलो आकार (माथि 20.5 G गर्न), चमकदार, गाढा रातो, आकार, अलिकति ribbed-चोटीदार राउण्ड छन्। तिनीहरूले fruiting सम्पूर्ण अवधिको आकार पङ्क्तिबद्ध छन्। उच्च पोर्टेबिलिटी द्वारा विशेषता।
विभिन्न लेट-yielding। स्ट्रबेरी ठूलो fruited "तखता" पहिलो जामुन धेरै ठूलो प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरूले बिस्तारै 20 ग्राम को एक औसत वजन संग सानो हुन्छन्। तिनीहरूले धनी रातो रंग मा चित्रित गर्दै छन्, एक मिठाई-अमिलो स्वाद र नाजुक सुगन्ध छ।
विविधता एक उच्च-yielding रूपमा विशेषता छ, fruiting एक लामो अवधि छ। संयंत्र एक शक्तिशाली झाडी घनी हरियो wrinkled खडा पात ढाकिएको छ। फूल बालाको उच्च, पातको स्तर मा स्थित, र कहिले काँही पनि अलि उच्च हो। तिनीहरूले धेरै ठूलो जामुन छैन वजन मा राख्न सक्षम छन्।
यो ग्रेड औसत नम्बरमा जुङ्गा। ग्रेड "तखता" botrytis सहित स्ट्रबेरी, मा निहित रोगहरु गर्न प्रतिरोधी छ।
आज, हाम्रो देशको विशाल मांग को उत्तर मा ठूलो fruited स्ट्रबेरी छ। साइबेरिया लागि ग्रेड मुख्यतया जाडो hardiness द्वारा विशेषता छ। स्ट्रबेरी "तखता" पार प्रजातिहरू Sivetta र Unduka पछि प्राप्त भएको छ। विविधता रूस उत्तरी क्षेत्रहरु बढ्दै लागि सिफारिस गरिएको छ।
को बिरुवाहरु गृष्म को बीच मा पकाना यो विविधता पर्छ। हामी पार प्रजातिहरू "फियरफ्याक्स" र "Zenga zengana" गरेर पायो। यो क्रमबद्ध को लेखक एए Zubov भयो। औसत भन्दा माथि पैदावार।
"रूबी Pendant" एक srednerosloe अर्द्ध-प्रसार झाडी छ। फूल बालाको बस पात स्तर तल छन्। लगभग 12 ग्राम वजन फल छोटो घाँटी संग, एक चोटीदार आकार छ। छील चमकदार, गाढा रातो छ। शरीरका, बाक्लो गाढा रातो रंग मा रंग छ।
समीक्षा माली साइबेरिया
आज विशाल लोकप्रियता ठूलो fruited स्ट्रबेरी पाए। तिनीहरूको समीक्षा मा अवैतनिक माली द्वारा रिपोर्ट साइबेरिया लागि ग्रेड, उच्च चिसो प्रतिरोध र उपज द्वारा विशेषता छन्।
ग्रेड "Darinka" माली जाडो hardiness, उच्च उपज, अचानक तापमान परिवर्तन गर्न उच्च प्रतिरोध, र किरा र रोग प्रतिरोध लागि उल्लेख गरे। साथै, अतिरिक्त चिस्यान ovaries र जामुन गर्दा botrytis गर्न susceptible छैनन्।
माली को राय मा, ग्रेड "तखता" यसको उपज र सरल हेरविचार लागि मुख्यतया आकर्षक छ। साथै, याद धेरै रोगहरु गर्न प्रतिरोधी को बोट छ।
यूराल लागि स्ट्रबेरी को किसिमहरु
यस क्षेत्रमा, माली पनि सपना आफ्नो साइटहरु ठूलो fruited स्ट्रबेरी बढ्न मा। फोटो संग प्रजातिहरू अहिले बागवानी मा धेरै प्रकाशनहरू पाउन सकिन्छ। तिनीहरूलाई केही हामीलाई भन्नुहोस्।
यो विविधता सानो गाढा हरियो पात को एक सानो संख्या सँग एक शक्तिशाली winterhardy ब्रश छ। फल, ठूलो आफ्नो वजन एक सुन्दर चमकदार सतह संग, पचास ग्राम सम्म पुग्छ। स्ट्रबेरी किरा र रोगहरु गर्न प्रतिरोधी हो। यो उच्च-yielding प्रजातिहरू बुझाउँछ।
यो ठूलो-fruited स्ट्रबेरी। सबै जाडो-हार्डी लागि यूराल ग्रेड, तर "irishka F1» -30 ° सी, चरम गर्मी र गंभीर waterlogging तल तापमान सामना। बिरुवाहरु एक जुङ्गा छैन, तर यो stems को एक ठूलो संख्या छ। फल धेरै सुगन्धित, गाढा रातो छन्। आफ्नो वजन - बारे '25
यो विदेशी चयन बताइरहेका, सबै भन्दा जाडो-हार्डी विविधता सायद छ। रातो, राम्रो गाढा - ठूलो जामुन एक कोर्नु आकारको फारम, आफ्नो रंग छ, 120 ग्राम तौल पुग्न। फंगल गर्न susceptible छैन।
"जुआन" ठूलो fruited स्ट्रबेरी को किसिमहरु - वजन 80-100 जामुन खडा गर्ने बलियो फूल बालाको संग एक शक्तिशाली ब्रश, तिनीहरूले राउन्ड र धेरै गुलियो मज्जा छन्। विविधता प्रतिकूल अवस्था अनुकूल उत्कृष्ट छ।
यूराल माली समीक्षा
सबै सूचीबद्ध ठूलो fruited स्ट्रबेरी (CV फोटो तपाईंलाई यस लेखमा देख्न सक्छन्) सफलतापूर्वक यूराल मा विकास गरिएको छ। माली जामुन यी प्रकार संग खुसी छन्। धेरै "जुआन" र "vikoda" उच्च उपज र धेरै ठूलो जामुन लागि किसिमहरु भन्छन्। तथापि, प्रशोधन र irishka F1 »विविधता रुचि" संरक्षण।
Udmurtia मा खेती को लागि स्ट्रबेरी
राम्रो परिणाम देखाउन र यो पृथ्वीमा ठूलो fruited स्ट्रबेरी। Udmurtia लागि ग्रेड चिसो हिउँ जाडोयाम र तातो गर्मीयाम सहनु। हामी तिनीहरूलाई केही तपाईं परिचय हुनेछ।
यो ठूलो-fruited स्ट्रबेरी ब्रिटिश प्रजनकों द्वारा सिर्जना गरियो। यो fruiting को एक एकदम लामो अवधि मध्यम प्रजातिहरू को परिपक्वता बुझाउँछ। बाली हरेक वर्ष बढ्दै छ। धेरै वर्ष को लागि परिवर्तन बिना एक ठाउँमा बढ्दै संभावना। जामुन औसत वजन - अप '60 गर्न
स्ट्रबेरी "प्रभु" को ठूलो fruited प्रजातिहरू जामुन tupokonicheskoy फारम, गहिरो रातो रंग छ। को तालु मा एक थोडा सजिलै देखिने अम्लता छ धेरै सुखद छ। एकै समयमा स्पाइक मा6जामुन गर्न परिपक्व। ग्रेड उच्च-yielding।
"प्रभु" स्ट्रबेरी को साधारण रोगहरु विभिन्न प्रतिरोध छ - botrytis, सतह रूपमा जामुन सधैं सुख्खा र जमीन संग सम्पर्क छ। एकत्र जामुन राम्रो, राखिएको transportable, अप गर्न तीन दिन को उपस्थिति कायम रहन्छ।
घाम मौसम जामुन मा उत्कृष्ट स्वाद छ। वर्षाको दिनमा, चीनी को एकाग्रता कम छ। यो एक वर्ष तीन पटक राम्रो लाउने चाहिन्छ भनेर आत्म-pollinating र जाडो हार्डी प्रजातिहरू छ। रुचाउने बढ्छ उत्पादकत्व बनाउन पछि। यो बोट जामुन को पकने र क्रप काटयो पछि प्रशस्त सिंचाई आवश्यक छ। देश को दक्षिणी क्षेत्रमा दुई बाली दिन्छ। Udmurtia मा, सेप्टेम्बर मा फक्रिएको दोस्रो पटक अनुकूल मौसम अवस्थामा।
यो ग्रेड एक संकर स्ट्रबेरी "Milanese" र स्ट्रबेरी छ। Hardiness, मध्यम पकने। जामुन स्वाद, धेरै मिठो छ नाजुक सुगन्ध संग, तिनीहरूले एउटा गोलो आकार छ, वरिपरि 35 वजन।
को ब्रश एकदम उच्च, खडा, फूल बालाको पातहरु माथि उठाएर छौं। यो विविधता लागि कि यसको उपज कवरेज को राशि प्रभावित छैन विशेषता द्वारा छ।
Remontant विविधता, यो गर्मी मौसमको लागि दुई बाली दिन्छ। व्यास मा झाडी 80 सेमी छ। जामुन oblong-चोटीदार आकार, खुशबूदार, मिठाई, कोमल मज्जा संग छन्। आफ्नो अधिकतम वजन - अप 30 तिनीहरूले प्रक्रिया र चिसो लागि उपयुक्त छन्।
तिनीहरूले गर्मी भर प्रशस्त फल हो किनभने ब्रश, हरेक वर्ष repotted हुनुपर्छ। पहिलो बाली फसल पछि झाडी सफा गर्न आवश्यक - peduncles पुरानो पात, पानी हाले फिड संग जामुन को रहलपहल हटाउन।
जुलाई को दोस्रो दशकमा गति राख्न दोस्रो कटनी, र गर्मी पनि अगस्ट को शुरुवात मा, सुन्दर छ, र अप चिसो जारी भने। यस किसिम "स्ट्रबेरी" रोगहरु को सबै भन्दा प्रतिरोधी छ। यो बेरी एक ट्रेल्लिस कोड मा whiskers गठन गर्ने एक बालकनी मा हुर्केका गर्न सकिन्छ, र ठाडो बढ्दै लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अर्को remontant ग्रेड। कम shrub, ठूलो पात, गाढा हरियो। स्ट्रबेरी जामुन को "जेनेभा" ठूलो fruited प्रजातिहरू पचास ग्राम सम्म दिन्छ। तिनीहरूले एक लम्बी आकार, मीठो स्वाद, गाढा-रातो रंग छ।
को बोट बीउ द्वारा प्रचारित गर्न सकिन्छ, वा झाडी विभाजन। पहिलो बाली फसल गर्दा बारम्बार फूल क्षण अघि लगभग दुई हप्ता सुरु हुन्छ। यो क्रमबद्ध को रोपण harvests र प्रशस्त पानी बीच संक्रमण अवधिमा माटो tilling, fertilizing आवश्यक पर्दछ।
जामुन दोस्रो बाली ठूलो छ, सँगै परिपक्व। Peduncles बरु छोटो, र यदि जामुन पत्ते पछि लुकाउने छन् कि एक भावना। विविधता रोगहरु, जाडो hardiness गर्न प्रतिरोधी छ। को ब्रश तीन वर्ष मा पौधे आवश्यक छ।
माथिको प्रजातिहरू द्वारा माली Udmurtia सराहना। तिनीहरूले remontant प्रजातिहरू दिन विशेष प्राथमिकता, तर माथि बढ्न खुसी र राम्रो राखिएको र तुसारो डर छ जो "प्रभु", को क्रमबद्ध।
बैंगनी गोरु जुदाई: विविधता, फोटो को वर्णन, खेती को सुविधाहरू
माली नोट: केही फूल जाडो अघि लगाए सकिन्छ
आधुनिक निर्माण मा प्रयोग नींव को मुख्य प्रकार
"Tsipiliny" को लागि एक स्वादिष्ट नुस्खा। पकाउने को रहस्य